ကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုမေ့ပစ်မလည်း? | Buzzy
"လမ်းပေါ်မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ် စာသင်ခန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲ ...................နိုင်ငံတာဝေဒနာရှင်များအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့ ကမ္ဘာမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ သတ်မှတ်ပေးပါ" ကြားဖူးနေကြသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသလို စာဖတ်သူဘော်ဒါတွေလည်းခံစားဖူးကြမှာဘဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာမိတာနဲ့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက်နဲ့ ပြောပြချင်မိခဲ့တယ်။ အခုတော့ အခွင့်အခါကြုံတာနဲ့ ပြောပြခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်အသေအလဲချစ်ရပါတယ်။ကြိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကိုပြန်မကြိုက်လို့ဆိုတာကတစ်မျိုး၊ ချစ်သူရသွားလို့ ကိုယ့်ကိုပစ်သွားတာကတစ်မျိုး၊ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘဲ စိတ်တွေညစ် အရက်တွေသောက် သီချင်းတွေအော်ဆိုကြ အလုပ်တွေပျက်ကြနဲ့ တမှိုင်မှိုင်တတွေတွေဖြစ်နေကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေအများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကအမှားကြီးမှားပါတယ်။ တကယ်ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နံပါတ်တစ်(ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဂရုစိုက်လိုက်ပါ) နံပါတ်နှစ်(သူမအနားကနေခွာနေပါ)။ ရှင်းရှင်းလေးပါဘဲ။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုသေသေချာချာလေး ထပ်ရှင်းပြပါရစေ။
"လမျးပျေါမှာလညျးတှနေို့ငျတယျ စာသငျခနျးနဲ့လကျဖကျရညျဆိုငျထဲ နရောအနှံ့ ပွနျ့ကြဲ ...................နိုငျငံတကာဝဒေနာရှငျမြားအတှကျ အမှတျတရဖွဈစဖေို့ ကမ်ဘာမှာအပွညျပွညျဆိုငျရာ အသညျးကှဲသောနေ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာအသညျးကှဲသောနေ့ ကြေးဇူးပွု၍ ကြေးဇူးပွု၍ သတျမှတျပေးပါ" ကွားဖူးနကွေသီခငျြးလေးတဈပုဒျ။ ကိုယျတိုငျလညျး ကွုံတှခေဲ့ဖူးသလို စာဖတျသူဘျောဒါတှလေညျးခံစားဖူးကွမှာဘဲ ဆိုပွီး ကိုယျခငျြးစာမိတာနဲ့ ဒီအကွောငျးအရာလေးကို သသေခြောခြာ လေးလေးနကျနကျနဲ့ ပွောပွခငျြမိခဲ့တယျ။ အခုတော့ အခှငျ့အခါကွုံတာနဲ့ ပွောပွခှငျ့ရခဲ့ပါပွီ။ ကိုယျအသအေလဲခဈြရပါတယျ။ကွိုကျရပါတယျဆိုတဲ့ကောငျမလေးက ကိုယျ့ကိုပွနျမကွိုကျလို့ဆိုတာကတဈမြိုး၊ ခဈြသူရသှားလို့ ကိုယျ့ကိုပဈသှားတာကတဈမြိုး၊ အမြိုးမြိုးသောအကွောငျးအရာတှနေဲ့ဘဲ စိတျတှညေဈ အရကျတှသောကျ သီခငျြးတှအေျောဆိုကွ အလုပျတှပေကျြကွနဲ့ တမှိုငျမှိုငျတတှတှေဖွေဈနကွေတဲ့ ဘျောဒါတှအေမြားကွီးတှဖေူ့းပါတယျ။ အဲ့ဒီနညျးလမျးတှကေအမှားကွီးမှားပါတယျ။ တကယျပွုလုပျသငျ့တဲ့ အရာတှကေို အကွမျးဖငျြးပွောရမယျ
ဆိုရငျ နံပါတျတဈ(ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျဂရုစိုကျလိုကျပါ) နံပါတျနှဈ(သူမအနားကနခှောနပေါ)။ ရှငျးရှငျးလေးပါဘဲ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီနှဈခကျြကိုသသေခြောခြာလေး ထပျရှငျးပွပါရစေ။
credit : photo
*မိမိကိုယ်ကို မိမိ ချစ်ပါ။ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သင့်ကိုမချစ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် သင့်မှာပြောင်းလဲ
အဆက်အသွယ်မလုပ်တာများလို့လား?အဆက်အသွယ်လုပ်တာဘဲများသွားလို့လား? ခဏလေးတွေ့၊ခဏလေးပြနလို့လား? သူမှားတာလား? ကိုယ်မှားတာလား? နှစ်ယောက်လုံးဘဲမှားနေတာလား? အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်မေးရင်းနဲ့ ဘယ်အရာကြောင့် မှားယွင်းခဲ့တာလည်းဆိုတာကို အဖြေရှာပါ။ အမှားတွေကနေ သင်ယူပါ။
နာကျင်ခံစားလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ ဘယ်အရာကပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါ။
*သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားပါ။ ဘောလုံးကန်မယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မယ်။ TV ကြည့်မယ်။ ၀ါသနာ
အသစ်တွေကိုရှာဖွေကြမယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သင်ရောက်ရှိနေတဲ့ အလွမ်းကမ္ဘာထဲကနေသင့်ကိုကယ်
ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စကားအတော်ကြာအောင်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့လည်း အချိန်ကုန်ပေးလိုက်ပါ။
*မိမိကိုယျကို မိမိ ခဈြပါ။ဂရုစိုကျပေးပါ။ သငျ့ကိုမခဈြနိုငျတဲ့လူတဈယောကျအတှကျ သငျ့မှာပွောငျးလဲစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသိနားလညျးထားပါ။
*အဲ့ဒီမိနျးကလေးနဲ့သငျနဲ့ကွားထဲမှာ ဘာတှကွေောငျ့အခုလိုဖွဈခဲ့တာလညျးဆိုတာကိုနားလညျဖို့ကွိုးစားပါ။အဆကျအသှယျမလုပျတာမြားလို့လား?အဆကျအသှယျလုပျတာဘဲမြားသှားလို့လား? ခဏလေးတှေ့၊ခဏလေးပွနလို့လား? သူမှားတာလား? ကိုယျမှားတာလား? နှဈယောကျလုံးဘဲမှားနတောလား? အဲ့ဒီမေးခှနျးတှကေို ကိုယျ့ဘာသာကိုပွနျမေးရငျးနဲ့ ဘယျအရာကွောငျ့ မှားယှငျးခဲ့တာလညျးဆိုတာကို အဖွရှောပါ။ အမှားတှကေနေ သငျယူပါ။နာကငျြခံစားလိုကျပါ ပွီးရငျတော့ ဘယျအရာကပိုကောငျးလဲဆိုတာကိုရှေးခယျြဆုပျကိုငျထားလိုကျပါ။
*သူငယျခငျြးတှနေဲ့အပွငျသှားပါ။ ဘောလုံးကနျမယျ။ လကျဖကျရညျဆိုငျထိုငျမယျ။ TV ကွညျ့မယျ။ ၀ါသနာအသဈတှကေိုရှာဖှကွေမယျ။ ဒီလိုပွုလုပျပေးခွငျးဟာ သငျရောကျရှိနတေဲ့ အလှမျးကမ်ဘာထဲကနသေငျ့ကိုကယျထုတျပေးနိုငျပါတယျ။ စကားအတျောကွာအောငျမပွောဖွဈခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့လညျး အခြိနျကုနျပေးလိုကျပါ။
*လုံးဝမတွေ့အောင်တော့ရှောင်မနေပါနဲ့။ သဘောထားကြီးတဲ့သူပီပီနေထိုင်လိုက်ပါ။ သူမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း
လည်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ သူမ ဘာကိုဆုံးရှုံးသွားသလည်း? သူမဘာကို လက်လွှတ်လိုက်လည်းဆိုတာကို သူမ
*သနားကြင်နာပေးပါ။ သူမရဲ့အနားကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် ဘယ်အချိန်မှာပြန်ဆုံတွေ့နိုင်မလည်း ဆိုတာမသိတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးတခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ သနားကြင်နာမှု့ပေးလိုက်ပါ။
*သူမရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှလုပ်မိဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ မီးကိုမီးနဲ့ငြိမ်းလို့မရပါဘူး။
အမှားမျိုးတွေ ထပ်ကြုံရအုံးမလည်းဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးသာ
*လုံးဝမတှအေ့ောငျတော့ရှောငျမနပေါနဲ့။ သဘောထားကွီးတဲ့သူပီပီနထေိုငျလိုကျပါ။ သူမရဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးလညျးဖွဈစရာမလိုပါဘူး။ သူမ ဘာကိုဆုံးရှုံးသှားသလညျး? သူမဘာကို လကျလှတျလိုကျလညျးဆိုတာကို သူမကိုယျတိုငျမွငျလာအောငျလှတျပေးထားလိုကျပါ။
*သနားကွငျနာပေးပါ။ သူမရဲ့အနားကနထှေကျသှားပွီးတဲ့နောကျ ဘယျအခြိနျမှာပွနျဆုံတှနေို့ငျမလညျး ဆိုတာမသိတဲ့အတှကျ နောကျဆုံးတခေါကျလောကျဖွဈဖွဈတော့ သနားကွငျနာမှု့ပေးလိုကျပါ။
*သူမရဲ့လကျရှိအနအေထားကိုထိခိုကျအောငျ ဘယျလိုပွဿနာမြိုးမှလုပျမိဖို့မကွိုးစားပါနဲ့။ မီးကိုမီးနဲ့ငွိမျးလို့မရပါဘူး။ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျဘဲကောငျးအောငျနပေေးပါ။ ရှဆေ့ကျလြှောကျရမယျ့ဘဝမှာဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးတှေ၊ဘယျလိုအမှားမြိုးတှေ ထပျကွုံရအုံးမလညျးဆိုတာကို သငျကိုယျတိုငျတောငျမသိနိုငျတဲ့အတှကျ အကောငျးဆုံးသာ ပွငျဆငျနထေိုငျလိုကျပါ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ ဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမလည်းဆိုတာကို သိသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ သီချင်းကို
ဆိုနေမယ့်အစား နောက်ထပ် ကြားကြားဖူးနေတဲ့ "ဟေး ငါအဆင်ပြေသွားပီ၊ နာကျင်စရာများမရှိ၊ စားလို့ကောင်း အိပ်လို့ကောင်းလို့အရင်ကထက်ဝလာတယ် .............ပြီးခဲ့သောကိစ္စများအတွက် ငါကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်" ဆိုတဲ့သီချင်းလေးသာ ပြောင်းဆိုလိုက်ပါတော့လား ကိုယ့်ဘော်ဒါတို့ရေ။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျ အဓိပ်ပာယျအပွညျ့အစုံကိုနားလညျသဘောပေါကျပွီးတော့ ဒီအခိုကျအတနျ့လေးကိုဘယျလိုကြျောဖွတျရမလညျးဆိုတာကို သိသှားလောကျပွီးထငျပါတယျ။ဒါဆိုရငျ အပွညျပွညျဆိုငျရာအသညျးကှဲသောနေ့ သီခငျြးကိုဆိုနမေယျ့အစား နောကျထပျ ကွားကွားဖူးနတေဲ့ "ဟေး ငါအဆငျပွသှေားပီ၊ နာကငျြစရာမြားမရှိ၊ စားလို့ကောငျး အိပျလို့ကောငျးလို့အရငျကထကျဝလာတယျ .............ပွီးခဲ့သောကိစ်စမြားအတှကျ ငါကြေးဇူးအရမျးတငျတယျ" ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးသာ ပွောငျးဆိုလိုကျပါတော့လား ကိုယျ့ဘျောဒါတို့ရေ။
ဘယ်နေရာတွေမှာ ပေါက်တဲ့ဝက်ခြံတွေက ဘယ်လိုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု့တွေကြောင့် ဖြစ်တာလည်းဆိုတာ